Rụọ ọrụ na-elekọta ihe Windows 8.1
Rụọ ọrụ na-elekọta ihe Windows 8.1
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ sistemụ arụmọrụ Windows, version 8.1 e nwere zoro ezo na akaụntụ,-adịghị okomoko akpọ "Administrator". Ọ dị mkpa iji hụ na ihe omume nke nsogbu na isi na akaụntụ, ga-enwe ike kpam kpam wepụ ha, ma ọ bụ mepụta ọrụ ọzọ. N`agbanyeghị eziokwu na isi akaụntụ bụ fọrọ nke nta mgbe ọ bụ onye nchịkwa nke ya ojiji nke ikike nwere ike ịbụ zuru ezu maka ogbugbu nke ụfọdụ ahụkarị arụmọrụ, ma ọ bụrụ na kọmputa nwe mmadụ na mberede gbanwee obodo nche iwu.
E nwere nnọọ mfe ma oké ọnụ ụzọ na-atụgharị n`ihi nke a - ịgbanwe parameters nke iwu akara. Iji mee nke a, mkpa:
N`otu oge ahụ pịa igodo "Windows" na "R" na keyboard.
Isi igbe itinye iwu "cmd" ma pịa "OK" bọtịnụ. Mgbe a na ime, iwu akara ga-malitere.
Iji rụọ ọrụ onye ọrụ "Admin" iji aka pịnye "net ọrụ nchịkwa/nọ n`ọrụ:ee"
Ọ dị mkpa! Ke edinam na kọmputa gị na-agba ọsọ na English-asụsụ mbipụta nke usoro, ihe ndekọ aha ga-ede ka "nchịkwa".
N`aka nke ya, iji gbanyụọ ndekọ a, na-agba ọsọ n`otu iwu, na-agbanwe na njedebe nke "ee," ka "ọ dịghị".
The Sony Nrụpụta-5 digital maka anya abuo Nrụpụta-3 na
Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na kọmputa m maliteziri iche ogologo na ngwa ngwa ọrụ. Ndị a bụ nje virus?
Gịnị mere i kwesịrị a carport